Ruo ogologo oge, ụlọ ọrụ na-ahụ maka ngwaahịa na-akpachara anya maka itinye ihe ndị na-emepụta siliki nke dị n'ime. Nke a nwere ike inwe ọtụtụ ihe iji nghọta dị iche na ojiji nke ngwaahịa a
Enwere ọtụtụ nghọtahie banyere ndị ọrụ ntọhapụ na silica gel
Otu. Maka mmetụta nke ihe ebipụtara, ọ dị mfe ime ka mmụba nke oge mbipụta.
Abụọ. Kwadebe ngwaahịa njikọta maka akwa ala, na-ebute adhesion na-adịghị mma.
3. Ọdịdị nke ngwaahịa dị mfe iji mepụta ntụpọ na-enwu gbaa n'elu.
4. Mfe ime ka ntu oyi.
N'ihi nke a n'elu na-eduhie eduhie ndị mmadụ na-atụ uche ohere, n'ihi na-atụ egwu na agaghịkwa eji, dapụtara na ogbenye arụmọrụ nke silicone tọhapụ gị n'ụlọnga ike na-arụ ọrụ. N'ezie, iji ogologo oge eji ihe eji eme ihe n'ime ụlọ ga-etolite ihe nkiri eserese na-ebu ọkụ na ebu, yana ngwaahịa a dị mfe ịchụpụ, ọkachasị maka ngwaahịa silicone nke siri ike ịpụ. Ezigbo ojiji nke ụlọ ọrụ ịhapụ ụlọ dị ezigbo aka iji melite arụmọrụ mmepụta, mana oge adịghị mkpụmkpụ, nnwale ahụ chọrọ oge ntụnyere dabara adaba.
Ndị na-esonụ ihe ga-mastered mgbe ezi uche iji silicone esịtidem ebu ntọhapụ gị iji chọpụta nkọwa:
Otu. Nhọrọ nke silica gel raw ngwaọrụ ekwesịghị ịbụ anyaukwu maka ọnụ ala. (akụrụngwa dị ọnụ ala, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na enweghi nsogbu na ihe ndị ahụ, nwere ike ịbụ nke anaghị akwụsi ike n'ihi oge mkpụmkpụ ha na oge nhazi ha.)
Nhọrọ nke onye na-ahụ maka disulfide ga-abụ nke ziri ezi, nke ka mma na nkwụsi ike (enwere ihe ndị ọzọ nwere obere ịdị ọcha, ngwa ngwa ngwa esi nri ahụ, nke ka mma, mana ọ na-adịwanye mma)
3. Agala n’ikpe gabigara oke. (n'ihi ọdịnaya ezughi oke sọlfọ nke ngwaahịa a, ọkachasị nhọrọ nke ndị na-agwọ ọrịa ngwa ngwa, elu ya dị ezigbo mma. N'ezie, arụghị ọrụ vulcanization emechabeghị, yabụ ntu oyi ga-apụta, nke nwere ike ọ gaghị abụ ihe kpatara nke dị n'ime ekpepụsị.)
4. Jiri ego kwesịrị ekwesị. (ọ bụ naanị inyeaka, ọ bụghị isi ọrụ. Ezi ojiji nke akụrụngwa, inyeaka ihe na nhazi technology ga-egosipụta uru ọ bara.)